पार्टीलाई आधारभूत वर्गका जनतासँग लैजानुपर्छ — Chetana Online
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाङ
टिकाराम खड्का राप्ती क्षेत्रमा इमान्दार कम्युनिष्ट नेताको रुपमा परिचित छन् । उनको जीवन शैली कम्युनिष्ट चरित्रकै छ । लामो समय देखि पार्टी राजनीतिमा लागेका खड्काले अहिलेसम्म सत्ताको स्वाद चाख्न पाएका छैनन् । पूर्व एमालेको अध्यक्ष समेत रहेका खड्का अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाङको अध्यक्ष भएका छन् । उनीसँग पार्टी एकता, उनको अनुभूती, आगामी कार्ययोजना लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर चेतना अनलाइनका सम्पादक पाण्डव शर्माले गरेको कुराकानिको सार :
नेकपा दाङको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । कस्तो अनुभूति भएको छ ?
मेरा लागि यो नयाँ चिज होइन । हिजो पनि म नेकपा एमालेको अध्यक्षको रुपमा काम गर्दै आएको थिए । त्यो भन्दा पनि पहिले पनि मैले पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिसकेको छु । अहिले दुई पार्टीबीच ऐतिहासाहिक एकता भएको छ । ठूलो पार्टीको अध्यक्ष हुन पाउँदा स्वभाविक रुपमा गौरव मान्ने कुरा नै भयो । हिजोको तुलनामा ठूलो पार्टीको नेता भइयो भन्ने लागेको छ ।
तपाई तत्कालिन एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । पार्टी एकताको क्रममा बीचमा अध्यक्ष भन्ने चर्चामा तपाईको नाम अलि कमजोर जस्तो मानिन्थ्यो । किन त्यस्तो भएको हो ?
हरायो भनेर कसलाई भन्ने ? विशेष गरेर प्रदेशको कार्यदलले सिफासि गर्दा एकल निर्णय गरेको थियो । त्यस कारणले मेरो नाम चर्चामा आउन सकेन जस्तो लाग्छ । दुई पार्टीबीचको एकतालाई समायोजना गर्दा केन्द्रमा विधि बन्यो । म त्यो विधि अन्तर्गत नै पार्टी अध्यक्ष भएको हुँ ।
पूर्व नेकपाको अध्यक्ष थिए म । दाङ जिल्लामा पूर्वा नेकपा एमालेको अध्यक्षले नेतृत्व गर्ने भनेर केन्द्रमा सहमती भए पछि म अध्यक्ष भएको हुँ । मलाई अध्यक्ष कसैले बनाएको भन्ने होइन । हराएको चाई थिइन । जिल्ला कार्यदलभित्र पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमै थिए । जिल्ला अध्यक्षको नाममा मेरो चर्चा भएको भए हुन्थ्यो भन्ने तपाईको अपेक्षा होला । त्यतिबेला आएन एउटा कुरा हो । आउनुपर्दथ्यो भन्ने तपाईको कुरासँग मेरो पनि सहमती हो । मैले पहिले पनि भनेको थियो ।
दुई पार्टीबीचको एकता हुँदा बहालवाला अध्यक्षको नाम नै चर्चामा छैन भने कस्तो खालको पार्टी एकता हो ? भनेर भनेको थिए । अहिले विधिले मलाई अध्यक्ष हुने अवसर दियो ।
राजनीतिमा किन यस्तो हुन्छ ?
राजनीति गहिरोसँग बुझ्नुपर्छ । राजनीति विभिन्न खालको चिन्तन मनन् र व्यवहार पनि हो । हामी माक्र्सवादी, लेनिनवादी पद्धतिबाट निर्देशित कम्युनिष्ट पार्टीका कमिटीहरुले गर्ने भनेको जनवादी तरिका नै हो ।
त्यतिबेला प्रदेशले गरेको निर्णय न्यायिक थिएन । न्यायिक नभएका कारणले देशव्यापी रुपमा एघार महिनाभन्दा बढी समय लियो । पद्धती विपरित थियो विगतको निर्णय । पछिल्लो समय पार्टी केन्द्रले पद्धति अनुरुप गर्नुहोस् भन्ने निर्देशन भयो । पार्टी केन्द्रकै निर्देशनमा म अध्यक्ष भएँ ।
दाङ पार्टीलाई अँझ प्रभावकारी बनाउनका लागि तपाईसँग के योजना छ ?
मसँग विशेषतः भावनात्मक एकता गर्ने क्षमता छ । हामी दुई ओटा ठूला पार्टीबीचको एकता मान्छेले सोँचे जस्तो स्वभाविक छैन । असाध्यै चुनौतीपूर्ण छ ।
हाम्रो कार्यशैली, व्यवहार, संगठनात्मक तौरतरिकाहरुकाबीचमा धेरै थिए । आज हामी दृष्टिकोण र बिचारका हिसाबले एक ठाउँमा आइसकेपछि एकता पैदा भएको छ । पहिलो बिचारको एकता भयो । त्यसपछि संगठनको एकता भएको छ ।
संगठनको एकतालाई भावनात्मक ढंगले वर्गीयरुपमा एकताबद्ध गर्ने मेरो काम रहन्छ । स्थानीय तह, टोलटोल र सेलसम्म एकता गर्ने कामको जिम्मेवारी मलाई रहन्छ । यौ चुनौतिलाई सामना गर्ने सामथ्र्य मसँग छ । म लचकताका साथ पार्टीलाई मिलाएर राख्ने औकात म राख्दछु ।
पार्टी एकता नहुँदै पूर्व एमालेमा अध्यक्ष रहँदा तपाईले जिल्लामा भावनात्मक एकता गर्न सक्नुभएको थिएन । अँझ दुई ओटा ठूला पार्टी एकता भएका छन् । फरकफरक पृष्ठभूमी र मनोविज्ञानबाट आएका नेता तथा कार्यकर्तालाई कसरी समेट्नुहुन्छ ?
कम्युनिष्ट पार्टीमा बिचारधारात्मक संघर्ष हुन्छ । गुट उपगुट हुँदै नभएको भन्ने होइन । त्यो कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना देखि हेर्नुभयो भने पार्टीभित्र कार्यशैलीगत मतभेदहरु प्रशस्त हुन्छन् । बैचारिक मतभेद हुन्छन् । हामीसँग मात्रै त्यो समस्या होइन ।
पूर्व माओवादीहरुसँग पनि त्यो समस्या थियो । हामीसँग पनि त्यो समस्या थियो । म तत्कालिन नेकपा एमालेको नेतृत्वमा आएपछि निर्वाचन अगाडी नै त्यो सबै मेटेर एकताबद्ध पार्टी बनेको थियो । स्थानीय निर्वाचनमा यसकै परिणाम स्वरुप नेकपा एमाले पहिलो बनेको थियो । त्यहि बिचार र दृष्टिकोणमा रहेर पछि तत्कालिन माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेर जिल्ला समन्वय समितिमामा हामी पहिलो भएका हौं ।
संघ र प्रदेशमा पनि त्यहि स्पिडका साथ पार्टीलाई एकताबद्ध गरियो । म अँझ पनि पार्टीलाई भावनात्मक एकता गर्न लागि पर्ने छु । हामी सामुहिक जिम्मेवारीबाट निर्देशित कार्यकर्ता हौंव् । हामी सबैको सामुहिक निर्णयबाट अगाडी बढ्ने हो । पार्टीलाई आधारभूत वर्गका जनतासँग लैजानुपर्छ । त्यसका लागि म हमेसा तयार छु ।
तपाई पार्टी भित्र इमान्दार, सरल र पादर्शी नेताको रुपमा स्थापित हुनुहुन्छ । तर, कतिपयले तपाई व्यक्तिगत रुपमा अशल भए पनि पटक पटक खराव प्रवृत्ती भएका मान्छेहरुको घेराबन्दिमा पर्नुहुन्छ भन्छन् नि ?
म कहिले पनि गतल तत्वको पक्षमा हुँदैन । म सधै गलत तत्वको विपक्षमा हुन्छु । जतिबेला पनि म त्यो लत प्रवृत्ती र तत्वको घेरावन्दि तोडेर अघि बढेका घटनाहरु छन् । एउटा होइन दर्जनौं उदाहरण दिन सक्छु । म कुनै तस्करहरुको घेरामा रहेर काम गर्दिन ।
अथवा अराजनीतिक तत्वहरुको घेराउमा रहेर काम गर्दिन । म कुनै स्वार्थ समुहको घेरामा रहँदैन । घेरामा नरहँदा र नमान्दाखेरी म विवादमा आए हुँला । तर, मैले ती कुराहरुलाई करेक्सन गर्ने गर्दै आएको छु । कैयौं कुराहरु करेक्सन पनि भइरहेको छ । म गलत ठाउँमा कहिले पनि जाँदैन । म निस्वार्थ ढंगले राजनीति गरिरहेको छु ।
म गलत ठाउँमा छैन । म राजनीतिको दूरुपयोग गरेर व्यवसाय गर्दैन । कुनै कारोवारसँग पनि सम्लग्न छैन । म विशुद्ध संगठनमा लाग्ने व्यक्ति हुँ । निस्वार्थ रुपले घरको मानो खाएर पार्टीको संगठन गरेको मान्छे हुँ । त्यस कारण मलाई केही कमाउनु पनि छैन । केही गुमाउनुपनि छैन । जे छ त्यो चिजप्रति म सन्तुष्ट गर्छु । त्यस कारणले पनि मलाई कसैले स्वार्थ गरेर बिचल्लि गराउने सम्भावना छैन ।
कतिपयले तपाईलाई टिकाराम खड्का इमान्दार भए पनि अडान नभएको नेता हो भन्छन् । आँफैले गरेका निर्णयहरु आँफै कार्यान्वयन नगरेर हच्किनुहुन्छ भन्छन त ?
मैले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गरेरै छाडेको छु । के चिज त्यस्तो छ र ? कसैले प्रश्न गरे भयो । जिल्ला समन्वय समितिको निर्णय मैले गरिन कि ? स्थानीय तहका निर्वाचनमा मैले उचित निर्णय गरिन कि ? संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पार्टी केन्द्रले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गरिन कि ? म कहाँ चुकेको छु ? म कहिँ चुकेको छैन । त्यो भन्नेहरुको भ्रम हो ।
उनीहरुको चेतनामा अहिले पनि भ्रम छ । गञ्जागोल छ । त्योबाट उनीहरु मुक्त भए पनि उनीहरु बल्ल सहि दिशामा जान सक्छन् ।